23 September 2021 Volume :9 Issue :41
Isifundo Sigubhe Iminyaka Eli-150 Ka-JL Dube
OSolwazi Cherif Keita (kwesobunxele) noSimangaliso Kumalo.Click here for English version
I-School of Education ne-School of Religion, Philosophy and Classics eKolishi le-Humanities, ngokubambisana neHhovisi LeNyuvesi LezokuHlelwa noKuthuthukiswa KoLimi bebehlele isifundo i-2021 John Langalibalele Dube Memorial Lecture. Lesisifundo besihlelwe nguNks Natalia Molebatsi, ongumbhali waseNingizimu Afrika, imbongi nesishabasheki sezamasiko.
IPhini Sekela-Shansela neNhloko yeKolishi LezesiNtu uSolwazi Nhlanhla Mkhize uvule lesi sifundo, wakhuluma ngencwadi engempilo kaDube ehlelwe yisifundiswa sase-UKZN uSolwazi Simangaliso Kumalo osihloko sayo sithi John, Nokutela and Angelina Dube. Pioneers of Education for self-reliance, liberatory religion and democratic politics in South Africa. ‘Ubuholi bukaDube kwakungobokuzidela nobuqotho. Kumfanele ukuhlonishwa ngalencwadi kanti iphume ngesikhathi esibalulekile lapho iNingizimu Afrika ibhekene nezinselelo zobuqotho khona. Kuzohlomula izizukulwane zamanje nezangomuso ngayo,’ kusho uMkhize, obhale isandulelo salencwadi. Izophuma emasontweni ambalwa ezayo.
I-John Langalibalele Dube Chair in Rural Education eSikoleni sezeMfundo uSolwazi Relebohile Moletsane uchaze umlando wesifundo sika-JL Dube, esaqala ngonyaka wama-2003. ‘Lomcimbi wezinsuku ezine ubugabe ngezifundiswa zasekhaya nezaphesheya ezikhumbule igalelo likaDr JL Dube obezogubha iminyaka eli-150 kulonyaka. Uma kukhulunywa ngezinselelo iNingizimu Afrika nomhlaba ababhekene nazo, njengeCOVID-19, ukuhlukunyezwa kwabantu ngokobulili, ukuguquguquka kwesimo sezulu, ububha, ukungalingani nemibango emphakathini, imigubho yokukhumbula ukuzalwa kwengcithabuchopho siyivula ngoxhaxha lwezifundo ezibheka umlando wayo nokuthi inyuvesi nabanye abalingani bangafunda ezinkolelweni nasezimfundisweni zakhe ukuletha ushintsho.’
I-William H Laird Professor of French and the Liberal Arts e-Carleton College (eMinnesota, eMelika) uSolwazi Cherif Keita nguyena owethule isifundo sokuvala loluchungechunge. Uthe waqala ukuzwa ngomlando kaDube ngenkathi evakashe okokuqala eNingizimu Afrika. ‘Ngabuyela eMelika nginentshisekelo yokufunda kabanzi ngaye, impilo yakhe nokuqeqeshwa kwakhe eMelika ngethemba lokuqoqela izizukulwane zangomuso umlando wakhe. Ngenkathi ngicabanga ngempilo kaDube, kwangigqamela ukuthi ifilimu yiyona ndlela enhle yokumbuyisa emiqondweni yabantu.’
UMnu Mweze Ngangura, umenzi wamafilimu ovelele wase-Democratic Republic of Congo, kodwa ozinze e-Brussels (e-Belgium), nguyena owacelwa ukuthi enze lefilimu. UKeita wayehlele ukuxoxa no-Nelson Mandela ngempilo kaDube. Nokho uMandela wathi akukuningi akwazi ngoDube. UKeita uthi kwamdumaza ukuzwa lokhu kepha wabona ithuba lokuhlonipha impilo kaDube ukuze yaziwe emhlabeni.
Uthi wathola ukuthi abazali bakaDube abamuthabatha base Melika bashadela edolobheni langakubo i-Northfield, e-Minnesota. ‘Indaba kaDube eyayiqale ingumcabango okude masisha yaphenduka indaba yendawo yangakithi nengithinta ngqo. Ngathola ngendlela engalindelekile ukuxhumana kwami nendaba abanye abantu ababecabanga ukuthi anginagunya lokuyixoxa. Esikhundleni sokuthi ngithole indaba kaDube, kwaba yiyona ethola mina,’ kusho uKeita.
NgoZibandlela wezi-2004, waqeda ifilimu yokuqala ebizwa ngokuthi Oberlin-Inanda: The Life and Times of John L. Dube, eyaqokelwa kwi-2005 Pan African Film Festival e-Ouagadougou (eBurkina Faso). Umzukulu kaDube uMnu Zenzele Dube, waya kulefestiveli, lapho le filimu kwabikwa ngayo kakhulu emaphephandabeni yaqokelwa emkhakheni i-Special Mention for Best Documentary in a Special Prize.
Le filimu yakhonjiswa kwi-2005 Durban International Film Festival e-Howard College. UMengameli Thabo Mbeki wanxusa ukuthi le filimu yokuqala ngoDube idluliselwe kwi-SABC. Ngokuqhubeka kwesikhathi yakhonjiswa isishabasheki somzabalazo uSolwazi Fatima Meer noMengameli Mandela.
‘Iqiniso lithi kusukela ngalelo langa langoMasingana wezi-1999 kuze kube namuhla impilo yami yashintsha kakhulu. Akudluli suku ngingacabanganga ngoDube, u-Wilcox, uNokutela Dube, Inanda, i-Cornfields, iThembalihle, nezinye izinto ezihambisana nomlando owawungalibaleka ngaphandle kweqhaza lami elincane ekuvumbululeni umlando weNingizimu Afrika oyinqabakayitshelwana,’ kusho uKeita.
Esephothula isifundo sakhe, uKeita uxoxele izihlwele ngenkondlo ethi Remember ka-Don Mattera. ‘UDube wayengumholi othobekile owayesebenza ngokuzikhandla esebenzela usuku lapho abantwana base-Afrika beyohamba ngeqholo khona, baphathe amatomu empilo yabo ngokuphelele ezweni loyisemkhulu. Sengathi isibonelo sakhe sokusebenzela umphakathi singasikhuthaza ukuthi siqhubeke sibe ngabantu abangcono ekwakheni izizwe zase-Afrika ezinobulungiswa nezilinganayo,’ kusho yena.
Enanela ngesifundo sakhe, uKumalo ukhulume ngencwadi ezophuma wakhuluma ngokulingana ngokobulili emshadweni kaDube noNokutela noDube no-Angelina. Uphinde wakhuluma ngokuphokophela kuka-Angelina ekuvikeleni igugu likaDube ngemva kokufa kwakhe.
UKumalo ukhulume ngemfundiso kaDube yokuzimela ‘engukuqondisisa nokuqonda, ukuba nolwazi olufanele nokwenza nokwakha ngemfundo etholakalayo.’ Ubalule ukuthi mibili imiphumela emqoka: okuyimfundo yokuzikhulula nemfundo njengesikhali esimqoka samathuba angcono kwezomnotho.
‘Sengathi singaqhubeka sifunde ezimfundisweni zikaDube ngemfundo, ubuholi nombusazwe njengoba zisenendawo nanamuhla,’ kusho uKumalo. Unxuse umphakathi ukuthi uqhubeke ulondoloze igugu likaDube, wenza isibopho sokuthi ngonyaka wama-2023 isifundo sizogxila futhi sigubhe iminyaka eli-150 kaNokutela Dube.
UMnu Langa Dube, umzukulu ka-JL Dube, ubonge i-UKZN noKeita ngokugcina umlando kayisemkhulu. ‘Siyabonga ukuthi umlando kababamkhulu uyakhunjulwa nokuthi uyahlonishwa e-Afrika. Lesisifundo sesikhumbuzo sihambisana nobumqoka bemfundo esezingeni elifanele njengesikhatli senkululeko enganeni yomuntu. Lokhu kufanele kuthathwe njengomsebenzi wawo wonke umuntu. Kufanele sihlale sikhuluma ngoDube kuzo zonke izindawo ezweni siqinise isiko lokuqopha umlando wethu ukuze ungalibaleki, ukwazi ukudlulela ezizukulwaneni ezizayo.
Amagama: wu-Melissa Mungroo